सुनसान मुस्ताङ, होटल व्यवसाय धराशायी – News Of Nepal
सुनसान मुस्ताङ, होटल व्यवसाय धराशायी
याे माैसममा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका प्रत्येक घरमा खचाखच पाहुना हुने समय हो । पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि मुख्य आधार मानिएको मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रलाई पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाले सुनसान बनाएको छ । गएको वर्ष बैशाखदेखि पुससम्म अर्थात् नौ महिना पूर्ण रुपमा बन्द भएको मुस्ताङ यसवर्ष पनि चैतदेखि फेरि बन्द भएको छ ।
मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघ एवं होटल व्यवसायी संघ मुस्ताङका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले १५ भन्दाबढी व्यवस्थित कोठा भएका २ सय ५० होटलहरु बन्द अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । प्रत्येक होटलमा सरदरमा पाँच जनाका दरले रोजगार पाएकोमा अवस्थामा अहिले मुस्ताङ जिल्लाको होटल व्यवसायमा कार्यरत एक हजार २५० जनाभन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष तुलाचनका अनुसार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसादेखि लोमान्थाङ गाउँपालिकाको छोसेरसम्म १५ भन्दा धेरै कोठा भएका २५० वटा होटलहरु सञ्चालनमा छन् । १० भन्दा कम कोठा भएका होटलहरुको संख्या पनि धेरै भए पनि उनीहरुको एकिन तथ्याङ्क निकाल्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
अरर्बौंको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ को कारणले गर्दा थलिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाभित्र कृषि तथा पर्यटन पेशा नै मुख्य हो, स्थानीय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र महिला तथा पाका पुस्ता भने होटल तथा कृषि एवं फलफूल खेतीपाती गर्ने गर्दछन् । हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र कागबेनी जस्ता क्षेत्रको कारणले गर्दा पनि पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि मुस्ताङलाई उपयुक्त जिल्लाका रुपमा मानिन्छ ।
मुस्ताङमा पर्यटन व्यवसायका लागि थासाङ गाउँपालिकाको कोबाङमा, घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोम र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा व्यवस्थित होटल तथा रिसोर्ट छन्भने अन्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त होटल रहेको हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खान बस्नको कहिल्यै समस्या हुँदैन । अधिकांश व्यवसायहरु आफ्नै पूर्वाधारमा सञ्चालित मुस्ताङमा करिब १०–१५ प्रतिशत होटल मात्र भाडामा रहेको होटल व्यवसायी समेत रहनुभएका अध्यक्ष तुलाचनको भनाइ छ ।
व्यवसाय डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ तर पनि अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ पूर्ण नियन्त्रणमा नआएसम्म खुलाउँदा आगामी दिनमा थप जोखिम हुन सक्नेतर्फ जिल्लावासी सजग रहेको तुलाचन बताउनुहुन्छ । ‘हामीले गतवर्ष पनि ९ महिनासम्म होटल व्यवसाय बन्द गरेका हौं, अन्य जिल्लाका व्यवसायीको दवावले मात्रै व्यवसाय खुलाएका थियौं’– उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड–१९ को लहरपछि मुस्ताङमा ३७६ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ भने १३ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका निमित्त प्रमुख टिकाराम भण्डारीले बताउनुभयो । सोमबारसम्म १५४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मुस्ताङमा १ सय ८५ जनाले कोरोना जितेका छन् ।
राज्यलाई पनि कर तिरौंला र आफू पनि बाँचौंला भनेर थालेको व्यवसाय कोरोनाले गर्दा बन्द हुँदा कठिन भएको युवा व्यवसायी अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । बन्दले गर्दा व्यवसायीहरु धरासायी भएर पुरै पलायन हुने अवस्था आएको सुवेदीको धारणा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, गतवर्ष ९ महिना घरभाडा मात्रै तिर्दा पनि मुस्किल भयो अहिलेको बन्दले उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने भयो । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुभएका सुवेदीले मेरो होटल रहेकै क्षेत्रमा संक्रमणदर उच्च भएकाले अब छिटै खुल्ने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो ।
मुस्ताडमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले गएको बैशाख ३१ गतेदेखि सुरु गरेको निषेधाज्ञा जेठ ३१ सम्म जारी छ । मुक्तिनाथ मन्दिरसहित पर्यटकीय स्थलमा हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको र निषेधाज्ञा समेत जारी भैरहेकाले पुनः बैशाख महिनादेखि पर्यटकीय क्षेत्र मुस्ताङ गुमनाम भएको छ । वर्सेनि ६० हजार विदेशी पर्यटक र करिब तीन लाखको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने अनुमान छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमको वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार मुस्ताडमा वर्सेनि मार्चदेखि जुलाइसम्म प्रत्येक महिना सात देखि १४ हजारसम्म विदेश पर्यटक आउने गर्थे । चैतेदशैंं तथा सोह्रश्राद्धमा आन्तरिक पर्यटकहरुको निकै घुइँचो हुने गर्दथ्यो ।
कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट आउनुभन्दा अघि पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा नियमित लयमा फर्किएको भए पनि पुनः कोरोनाले त्यो पनि बन्द भएको छ । जोमेसोम नागरिक उड््ययन कार्यालयका प्रमुख दीपक विकले दिएको जानकारीअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु हुनु अघिको दुई महिनामा दैनिक पाँच वटासम्म उडान हुने गरेको थियो । कहिलेकाँहीँ पर्यटकको चापअनुसार १० वटा उडानसम्म भएको थियो भने भारतीय पर्यटकको समेत फ्लो बढ्दै जान थालेको थियो । तस्बीर : सुजिता थकाली
तस्बीर : सुजिता थकाली
शुक्रबार, असार ४, २०७८ मा प्रकाशित
जीप दुर्घटनामा एकको मृत्यु, आठजना घाइते
युवा संघको अगुवाइमा मार्फाखोलामा पुल
प्रवासी नेपाली मञ्चको पहलमा अक्सिजन प्लान्ट
नेकपा एमाले निकट प्रवाशीहरुको अगुवाइमा थालीएको अगुवाइले मुर्त रुप लिएको छ । नेकपा (एमाले )प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च,..
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १० बुँदे सहमति अनुमोदन, २२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री देउवालाई माधव नेपालको वचन : विश्वासको मत दिन्छौं
साउनदेखि लामो दूरीका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको अवस्था असार ३० गते
आरजुले राधिकाबाट सिकून्, देउवाले ओलीबाट नसिकून्
ती पुष्पलाल, यी कम्युनिष्ट !
गैर आवासीय नेपाली संघ माल्टाको अध्यक्षमा भुवन आर्याल July 31, 2021
जीप दुर्घटनामा एकको मृत्यु, आठजना घाइते July 30, 2021
युवा संघको अगुवाइमा मार्फाखोलामा पुल July 28, 2021
प्रवासी नेपाली मञ्चको पहलमा अक्सिजन प्लान्ट July 28, 2021
मनोपरामर्शमा केन्द्रीत हुन आवश्यक July 25, 2021
गजल July 24, 2021
आरजुले राधिकाबाट सिकून्, देउवाले ओलीबाट नसिकून् July 24, 2021
आमा July 24, 2021
ती पुष्पलाल, यी कम्युनिष्ट ! July 22, 2021
देउवालाई विश्वासको मत July 20, 2021
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १० बुँदे सहमति अनुमोदन, २२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण July 19, 2021
युवा संघ नेपाल म्याग्दीद्वारा घोर्लास पाखोमा वृक्षारोपण (फोटोफिचर) July 19, 2021
विभेदकारी समवेदना July 15, 2021
प्रधानमन्त्री देउवालाई माधव नेपालको वचन : विश्वासको मत दिन्छौं July 15, 2021
साउनदेखि लामो दूरीका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने तयारी July 15, 2021